Fampahafantarana Ireo Peace Corps Bilaogera Ao Maraoka
Maraoka 31 Janoary 2018
Ahitana vondrona bilaogera marobe amin'ny fiteny Anglisy ao Maraoka, mino aho fa mahita izany ianao. Raha marobe ireo teratany Maraokana mampiasa ny fahaizany teny Anglisy, ny sasany kosa dia mpampianatra na mpiasa mpila ravinahitra,
Amerika Avaratra 31 Janoary 2018
Sahara Andrefana 29 Janoary 2018
Yemen 29 Janoary 2018
Maraoka: Mandray Ny Ramadan
Maraoka 29 Janoary 2018
Indray mandeha isan-taona ihany ny Ramadany, ary miomana izany amin'ny volana ho avy ireo bilaogera Maraokana (tahaka ny any Ejypta, Libya, sy any an-kafa).
Israely 29 Janoary 2018
Israely : Hanukkah, Fetiben'ny Hazavàna Sy Ady Ara-Kolontsaina
Israely 26 Janoary 2018
Fety iray isan'ny tena ankamamian'ny Jiosy nandritra ny fotoana rehetra ary manana lanja ara-tantara raha resaka mifandray amin'ny lafiny ara-kolontsaiana sy ny maha-izy an-dry zareo Israeliàna ny Hanukkah, Ny Hanukkah no fahatsiarovana ny fandresen'ireo Israelita taloha ny Grika tamina ady izay niseho ny taona 165 talohan'i Jesoa Kristy. Tsy ady faritra na harena ilay ady, fa resaka ady amin'ny fahafahana; ny zo hanana fironam-pivavahana sy hanaraka ny finoana Jiosy. Gilad Lotan mampiseho antsika ny fitohizan'ny ady mandraka ankehitriny.
Maraoka 25 Janoary 2018
Ejipta 24 Janoary 2018
Arabia Saodita 24 Janoary 2018